३० किलो सुन प्रकरणमा जोडियो यी महिलाको नाम, कम्युनिष्ट सरकार खतरामा ! – Namaste Dainik
July 13, 2020 July 20, 2020 NamastedainikLeaveaComment on ३० किलो सुन प्रकरणमा जोडियो यी महिलाको नाम, कम्युनिष्ट सरकार खतरामा !
काठमाडौँ । एक युवतीका कारण सरकार संकटमा देखिएको छ । भारत, केरला राज्यमा ठुलो परिणामको सुन तस्करी मुद्दामा गम्भीर खुलासा भएको छ । यो घटनामा अब भारतको राष्ट्रिय अनुसन्धान एजेन्सी (एनआईए) प्रवेश गरेको छ । यस प्रकरणमा संलग्न थप व्यक्तिहरु पक्राउ परेको जानकारी दिएको छ । एनआईएले स्वप्ना सुरेश र सन्दीप नायरको परिवारलाई पनि हिरासतमा लिएको छ । स्वप्नालाई कोचीको एनआईए कार्यालयमा प्रस्तुत गर्ने दैनिक भास्करको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । एनआईएले जुलाई ६ मा पक्राउ परेका आरोपित सरितकुमारलाई पनि सोधपुछ गरेको जानकारी दिएको छ ।
सुन प्रकरण के हो ?
गएको ५ जुलाईमा, तिरुवनन्तपुरम अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार विभागका अधिकारीहरूले गोप्य सूचनाका आधारमा युएईबाट कूटनीतिक नियोगबाट आएको सामान पक्राउ गरेका थिए । विदेश मन्त्रालयबाट अनुमति लिए पछि युएई कन्सुलेटका अधिकारीहरूको उपस्थितिमा उक्त सामान खोलियो । उक्त सामान खोलेपछि ३० किलोग्राम सुन घरेलु प्रयोगका विभिन्न वस्तुले भरिएको सामानभित्र लुकाइएको खुलासा भएको थियो । आजको दिनमा यसको मूल्य करीव १३ करोड २० लाख भारु अर्थात नेरु झण्डै २१ करोड भनिएको छ ।
शुक्रवार दर्ता गरिएको थियो मुद्दा
एनआईएले शुक्रबार यस प्रकरणमा सरितकुमार, स्वप्ना सुरेश र सन्दीप नायरको बिरूद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । तीनै जनालाई तस्करीमा संलग्न भएको आरोप लगाइएको छ । स्वप्ना सुरेश केरला राज्य सूचना प्रविधि इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (केएसआईटीएल) मा काम गर्थिन् । यो आईटी विभाग अन्तर्गत आउँछ,जुन केरलाको मुख्यमन्त्रीको अधीनमा रहेको छ ।
उनी लामो समय युएई बसेर भारत आएको पनि बताइन्छ । उनको युएईमा भएका तस्करहरुसँग राम्रो सम्बन्ध रहेको छ । उनले अरबी राम्रोसँग बोल्न सक्छिँन् । उनको युएईमा भएका चर्चित तस्करहरुसँग सम्बन्ध रहेको हुनसक्ने बताइन्छ । उनको नाम तस्करी काण्डमा जोडिएपछि उनलाई (केएसआईटीएल) को जागिरबाट निकालिएको छ ।
उनी युएईकी पूर्व वाणिज्य अधिकारी पनि भइन । जानकारी अनुसार अर्का सरित कुमारले तिरुअनन्तपुरममा युएई कन्सुलेटको कार्यालयमा जनसम्पर्क अधिकारी (पीआरओ) को रूपमा काम गर्दै आएका थिए । उनलाई ६ जुलाईमा पक्राउ गरिएको थियो । केरलामा अहिले कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार रहेको छ । राज्यमा पिनाराई विजयनको नेतृत्वमा भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी) को सरकार रहेको छ । सरकारका मुख्यमन्त्रीको नाक मुनीबाट सुन तस्कर भएको भन्दै विपक्षी दलहरुले विरोध जनाइरहेका छन् । यही कारण उनको शासन हल्लिने निश्चित छ । विपक्षीले राजिनामा माग गरिसकेका छन् ।
स्वप्नाले केरला उच्च न्यायालयमा अग्रिम जमानतको लागि याचिका दायर गरिन् । स्वप्ना सुरेशले केरला उच्च अदालतमा अग्रिम जमानतका लागि याचिका दायर गरेकी हुन् । उच्च अदालतले गत मंगलबार सुनुवाई रोक्यो । एनआईएले अग्रिम जमानतको विरोध गरेको थियो । केन्द्र सरकारका सल्लाहकारले भनेका थिए कि यदि एनआईएले अनुसन्धान गरिरहेको छ भने उच्च अदालतले अग्रिम जमानत याचिकामा विचार गर्न सक्दैन । तर यो घटनालाई केन्द्र सरकारले समेत अत्यन्तै उच्चताका साथ हेरिरहेको छ ।
यो खबर जनबोली मिडिया मा प्रकाशीत छ ।